Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.3 Okungasebenzi
Ukukala emithonjeni emikhulu yedatha kungencane kakhulu ukushintsha ukuziphatha.
Enye inselele yokucwaninga kwezenhlalakahle ukuthi abantu bangashintsha ukuziphatha kwabo uma beyazi ukuthi babonwa ngabacwaningi. Ososayensi bezenhlalakahle ngokuvamile babiza le reactivity (Webb et al. 1966) . Isibonelo, abantu bangaba nomusa kakhulu ekufundeni kwelabhutriki kunezifundo zasensimini ngoba ngaphambili babesazi ukuthi bayagcinwa (Levitt and List 2007a) . Esinye isici semininingwane enkulu abacwaningi abaningi abasithola bayethembisayo ukuthi ngokuvamile abahlanganyeli abaqapheli ukuthi idatha yabo iyathunjwa noma sebejwayele ukuqoqwa kwedatha ukuthi ayisashintshi ukuziphatha kwabo. Ngenxa yokuthi ababambiqhaza bangasebenzi , ngakho-ke, imithombo eminingi yedatha enkulu ingasetshenziselwa ukutadisha ukuziphatha okungakenzeki ukulinganisa okunembile ngaphambili. Isibonelo, u- Stephens-Davidowitz (2014) wasebenzisa ukusabalalisa kwemibandela yobuhlanga emibhalweni yosesho yokuhlola i-animus ezindaweni ezihlukene zase-United States. I-non-active futhi enkulu (bheka isigaba 2.3.1) uhlobo lwemiphumela yokunikwa idatha enikwe amandla okungaba nzima ukusebenzisa ezinye izindlela, ezifana nokuhlola.
Ukungabikho komsebenzi, noma kunjalo, akuqinisekisi ukuthi lezi zindlela zibonisa ngokuqondile ukuziphatha kwabantu noma isimo sengqondo. Isibonelo, njengomphenduli owodwa esifundweni esisekelwe ku-interview wathi, "Akukhona ukuthi anginayo izinkinga, angikuzifaki ku-Facebook" (Newman et al. 2011) . Ngamanye amazwi, yize noma ezinye imithombo enkulu yedatha ingasebenzi, akuzona zonke izifiso zokuzijabulisa zomphakathi, ukuthambekela kwabantu okufuna ukuziveza ngendlela engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, njengoba ngizochaza ngokuhamba kwesikhathi esahlukweni, ukuziphatha okufakwe emithonjeni emikhulu yedatha ngezinye izikhathi kuthintwa imigomo yabanikazi beplatifomu, inkinga engizoyibiza ngokuthi i- algorithmic confounding . Okokugcina, nakuba ukungenzi lutho kungasiza ekucwaningweni, ukulandelela ukuziphatha kwabantu ngaphandle kwemvume yabo nokuqwashisa kuphakamisa ukukhathazeka kokuziphatha okumele ngikuchaze ngokuningiliziwe esahlukweni 6.
Izakhiwo ezintathu engizichazile-ezinkulu, njalo, futhi ezingasebenzi-ngokuvamile, kodwa hhayi njalo, zinenzuzo yokucwaninga kwezenhlalakahle. Okulandelayo, ngizophendukela ezakhiweni eziyisikhombisa zemithombo emikhulu yedatha-engaphelele, engenakufinyeleleka, engabonakali, yokukhukhumeza, ngokungahambisani kahle, engcolile, nokuzwela-ukuthi ngokuvamile, kodwa hhayi njalo, yenza izinkinga zocwaningo.